Mamorona scanner 3D goavambe noho ny Raspberry Pi | Fitaovana maimaim-poana
Joaquin Garcia Cobo | | Fanontana 3D, Raspberry Pi
Mitombo haingana ny tontolon'ny fanontana 3D. Na izany aza, ny fanontana 3D amin'izao fotoana izao dia mifototra amin'ny fahazoana modely 3D sy fanontana azy ireo. Raha atao teny hafa, dia mazàna tsy mamorona modely 3D tany am-boalohany ianao. Ho an'ity dia mampiasa scanner zavatra ny mpampiasa. SAINGY Ahoana raha tsy manana scanner amin'ny zavatra isika? Ahoana raha te hanao scan ny zavatra lehibe kokoa isika? inona no ataontsika?
Nahavita nahita ny vahaolana ny mpanao anglisy iray. Niantso ity mpanao ity Poppy Mosbacher dia namorona scanner 3D ho an'ny olombelona. Ity gadget ity dia noforonina ho an'ny orinasany, orinasa lamaody mila mamorona modely 3D haingana.
Poppy Mosbacher dia namorona scanner 3D mampiasa Free Hardware sy Free Software. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nampiasa tabilao avy amin'ny tetikasa Arduino izy fa nampiasa tabilao avy amin'ny Raspberry Pi. manokana nampiasa Raspberry Pi Zero niaraka tamin'ny Pi Cam.
Ity andiana zana-kazo ity dia naverina im-27, izany hoe ilay mpanao scanner dia mampiasa tabilao Raspberry Pi Zero 27 sy 27 PiCams XNUMX nozaraina nanerana ny rafitra goavambe rehetra. Ity rafitra goavambe ity dia noforonina misy fantsona baoritra sy tariby izay mampifandray ny takelaka rehetra amin'ny fitaovana tokana izay miasa amin'ny maha mpizara azy. Ny rindrambaiko ampiasaina hampiasana ity scanner 3D goavambe ity dia Autocade ReMake, rindrambaiko iray manodin-tsary hamoronana maodely 3D.
Soa ihany ity scanner 3D goavana ity dia azontsika atao ny mamerina sy manangana ny tenantsika hatramin'ny nampakarin'ny mpamorona azy Tahirin'ny torolàlana. Amin'ity trano fitahirizana ity dia mahita torolàlana iray izahay, torolàlana hananganana ary ireo rindrambaiko rehetra ilaina hiasan'ny tabilao Pi Zero rehetra. Ny tabilao Pi Zero dia matetika manana laza ho ambany fahefana ary mety ho izany, saingy azo antoka fa tena ilaina izy ireo, farafaharatsiny ho an'ny mpampiasa farany. Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Mamorona scanner 3D goavambe izy ireo noho ny Raspberry Pi
kōan dia hoy izy:
Nanamboatra scanner 3D misy fakantsary 108 izahay.
Valiny tamin'i Koan
DeltaQuad, drone afaka homologate 150 kilometatra fahaleovan-tena
Ny BASF dia mifehy ny mpanamboatra filamente holandey Innofil3D